Manampy ny Jamba Atsy Afrika ny Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Catalan Chichewa Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galoà Goun Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Mixe Myama Norvezianina Oromo Ourdou Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tailandey Tankarana Tarasque Tigrigna Tiorka Tongan Totonac Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Wallis Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Fanampiana ny Jamba Atsy Afrika
Tsy mitovy amin’ny fiainan’ny jamba any amin’ny tany hafa ny fiainan’ny jamba any amin’ny tany mahantra sasany. Ailikiliky ny fiaraha-monina izy ireo matetika, ary tsy misy manampy rehefa sahirana manao an’ireo zavatra mahazatra ny olona mahita. Sahirana, ohatra, izy ireo rehefa miantsena, na rehefa mandeha bisy, na rehefa mikirakira vola. Mety ho sarotra amin’izy ireo koa ny mamaky teny. Tsy izy rehetra mantsy no mahay mamaky soratra Braille, ary na mahay aza izy, dia mety ho sahirana vao mahita boky amin’ny fiteniny.
Efa 100 taona mahery izay ny Vavolombelon’i Jehovah no namokatra boky ara-baiboly ho an’ny jamba. Misy fiteny antsoina hoe Chichewa any Malawi. Nahazo fitaovana fanaovana pirinty soratra Braille sy fanakambanam-boky avy any Holandy ny Vavolombelona any, vao haingana, mba hamoahana boky amin’io fiteny io.
Manana traikefa amin’ny famokarana boky amin’ny soratra Braille i Leo. Avy any amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Brezila izy ary nankany Malawi. Nampiofana ekipa iray misy olona dimy izy mba hahaizan’izy ireo mampiasa an’ilay fitaovana vaovao. Nianaran’izy ireo koa ilay programan’ordinatera namboarin’ny Vavolombelona, izay mamadika ny soratra ho Braille. Mamadika lahatsoratra ho Braille amin’ny fiteny chichewa io programa io. Mba hahafahan’ilay programa hanao an’izany, dia nila nanamboatra tabilao iray aloha ireo mpampiasa azy io. Hita ao ireo endri-tsoratra mahazatra sy ireo endri-tsoratra Braille mifanandrify aminy ho an’ny fiteny chichewa. Afaka mamadika lahatsoratra ho Braille sy manamboatra ny endrik’ilay boky ilay programa, mba ho mora ho an’ny jamba ny hamaky azy. Ahoana no hevitry ny olona sasany any Malawi momba ny bokin’izy ireo amin’ny soratra Braille?
Vehivavy jamba, 30 taona mahery kely, i Munyaradzi. Mpanolotra fandaharana iray ao amin’ny radio no asany. Mandany 70 ora isam-bolana koa izy, mba hampianarana Baiboly. Hoy izy: “Boky amin’ny soratra Braille anglisy no azoko hatramin’izay. Tena nanohina ny foko anefa ilay izy rehefa tamin’ny fiteniko. Tena ankasitrahako ny ezaka nataon’ireo Vavolombelona sy ny vola lanin’izy ireo, mba hahazoanay boky amin’ny soratra Braille amin’ny fiteninay. Tsapako hoe tsy hadino izahay sady sarobidy.”
Vavolombelona mipetraka any amin’ny faritra avaratr’i Malawi i Francis. Olon-kafa foana no namaky teny ho azy hatramin’izay, satria jamba izy. Hoy izy rehefa naharay ny bokiny voalohany amin’ny soratra Braille amin’ny fiteny chichewa: “Sao dia manonofy àry aho? Tsara be mihitsy ity!”
Jamba koa i Loyce ary mpitory manontolo andro. Nanampy olona 52 hanana fiainana tsara kokoa izy. Ahoana no nataony? Mampiasa boky amin’ny soratra Braille izy rehefa mampianatra Baiboly. Ny olona ampianariny kosa mampiasa boky mahazatra. Bokin’ny Vavolombelon’i Jehovah daholo no ampiasain’izy ireo.
Loyce mampianatra Baiboly
Hoy i Leo, ilay mpampiofana avy any Brezila noresahina terỳ aloha: “Mahatsiaro ho afa-po be mihitsy aho rehefa manome boky ara-baiboly amin’ny soratra Braille ho an’ny olona, sy mahita ny fihetsiny rehefa fantany hoe amin’ny fiteniny ilay izy. Maro aminy no milaza hoe misaotra an’i Jehovah izy ireo, ary tena faly satria afaka manomana irery ny fivoriana kristianina sy ny fitoriana. Tsy mila olon-kafa hamaky teny ho azy intsony izy ireo. Mba tena samirery amin’izay ny fianarana samirery ataony. Afaka manampy kokoa ny fianakaviany mba handroso ara-panahy izy ireo. Lasa akaiky kokoa an’i Jehovah koa izy ireo noho ireny boky ireny.”
Lasa misy ny anaran’Andriamanitra ao amin’ny Baiboly amin’ny teny swahili. Ahoana no nahatonga izany?
Ahoana no hampiasanao ny ‘mason’ny fonao’?
Video: “Very Aho Raha Tsy Nisy An’io”